မှော်ဘီမြို့မရဲစခန်းတွင်လာရောက်အပ်နှံထားသော မိန်းကလေးငယ်အား မိဘများထံ ပြန်လည်အပ်နှံ
၄.၁၁.၂၀၁၃ရက်နေ့ ၂၀၀၀အချိန် ရန်ကုန်ဘက်မှပြည်ဘက်သို
့မောင်းနှင်လာသော န/၄၈၈၆ ဟိုင်းလတ်အဖြူရောင်လက်ပံတန်း - ရန်ကုန်ခရီးသည်တင်ယာဉ်ပေါ်တွင် အသက်(၇)နှစ်ခန့်အရွယ်၊ စကားမပြောတတ်မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးမှာ အုပ်ထိန်းသူမပါဘဲ ငိုးကြွေးနေကြောင်း မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ဆပ်သွားတောကျေးရွာ၊ စမ်းချောင်းပေါက် မှတ်တိုင်အရောက်တွင် သိရှိရသဖြင့် ယာဉ်မောင်း ဦးအောင်ကျော်လင်းမှအဆိုပါမိန်းကလေးငယ်အားမှော်ဘီမြို့မရဲစခန်းသို့ လာရောက် ပို့အပ်သဖြင့် အခြားတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များရှိ ရဲစခန်းအသီးသီးသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
မှော်ဘီမြို့မရဲစခန်းတွင် လာရောက်အပ်နှံထားသည့် မိန်းကလေးငယ်၏ မိဘများဖြစ်သော ဦးအောင်ဌေး၊ဒေါ်မိနွယ်၊ငဖြူလေးကျေးရွာ၊သာယာဝတီ
မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနေသူတို့သည် ၅.၁၁.၂၀၁၃ရက်နေ့ ၁၁၃၀အချိန် မှော်ဘီမြို့မရဲစခန်းသို့ ရောက်ရှိလာသဖြင့် အဆိုပါ
မိန်းကလေးငယ် မငုဝါ(ခ)ရွှေသဇင် (၈)နှစ်အား မှော်ဘီမြို့နယ်၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသိန်းဝင်း၊ ငဖြူလေးကျေးရွာ
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမြင့်သိန်းတို့၏ ရှေ့မှောက်တွင် မိဘများထံ
ပဋိပက္ခများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားနေသည့် ရခိုင်ပြည်နယ် ပေါက်တောမြို့နယ် ဆင်တက်မော်ကျေးရွာ အုပ်စုတွင် နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် လူသုံးဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့သဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုများ ထပ်မံ မဖြစ်ပွားစေရန် လုံခြုံရေးအင်အား တိုးမြှင့်ထားကြောင်း မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ တာဝန်ကျ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
နယ်မြေ လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးအတွက် တပ်မတော်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ အင်အားများ တိုးချဲ့ထားပြီး ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူများကို ဖမ်းဆီးရန် စုံစမ်းနေကြောင်း ယင်းရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ သိရှိရသည်။
ဆင်တက်မော် ကျေးရွာအုပ်စုတွင် အကြမ်းဖက်မှုများ မဖြစ်ပွားမီက လုံခြုံရေးအင်အား ၂၀ ခန့်သာ ရှိသော်လည်း ယခုအင်အား ၇၀ ခန့် လုံခြုံရေး ချထားသည်ကို တွေ့ရကြောင်း ဆင်တက်မော် ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူ ဘင်္ဂါလီ အမျိုးသား ဦးအောင်နိုင်က ပြောကြားသည်။
ရခိုင် တိုင်းရင်းသူ အမျိုးသမီး အသတ်ခံရမှုကို အစိုးရအနေနှင့် ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပေါက်တောမြို့နယ် ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးအောင်ကျော်ထီးက ပြောကြားသည်။
“ဒီကိစ္စမျိုးမှာ တရားခံကို အလွယ် ဖမ်းမိဖို့ကတော့ မလွယ်ဘူး၊ ကျူးလွန်တဲ့သူကို ဝှက်ထား တတ်ကြတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်စဉ်များတွင် ရခိုင် အမျိုးသမီး တစ်ဦးနှင့် ဘင်္ဂါလီ အမျိုးသားနှစ်ဦး သေဆုံးပြီး ရခိုင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း ဒဏ်ရာရရှိသည့် ဘင်္ဂါလီဦးရေ မည်မျှ ရှိသည်ကို အတည်ပြု ပြောဆိုနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း ပေါက်တောမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ တာဝန်ကျ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောဆိုသည်။
သေဆုံးသူ ဘင်္ဂါလီ နှစ်ဦးအနက် တစ်ဦးမှာ အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာတွင် သေဆုံးခဲ့ပြီး တစ်ဦးမှာ စစ်တွေ ဆေးရုံတွင် သေဆုံးခဲ့သည်ဟု အဆိုပါ ရဲအရာရှိက ပြောဆိုသော်လည်း ဘင်္ဂါလီနှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့သည့် အကြောင်းအရင်းကိုမူ ဖြေဆိုခြင်း မရှိပေ။
ဆင်တက်မော် ကျေးရွာမှ ဘင်္ဂါလီ ၂၀ ဦးခန့်က ထင်းခုတ်နေစဉ် ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများက ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့် ထွက်ပြေးခဲ့ရကြောင်း၊ ငါးဦးမှာ ထွက်ပြေး မလွတ်မြောက်ဘဲ ကျန်နေခဲ့၍ ဘင်္ဂါလီ အမျိုးသား ၁၀၀ ခန့်ဖြင့် ပြန်လည် ရှာဖွေရာတွင် သေဆုံးနေသည့် ဘင်္ဂါလီ အမျိုးသားနှစ်ဦး၏ အလောင်းကို တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ဆင်တက်မော် ကျေးရွာမှ ဘင်္ဂါလီ အမျိုးသား ဦးအောင်နိုင်က ပြောကြားသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့် ဆက်စပ်ကာ ချောင်းစပ်၌ ငါးရှာ၊ ခုံးကောက်နေသည့် ဆင်တက်မော် ကျေးရွာအုပ်စု ဆင်အိုင်ကျေးရွာမှ အမျိုးသမီး ငါးဦးခန့်ကို နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဘင်္ဂါလီသုံးဦးက ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကြောင့် တစ်ဦးမှာ ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့ပြီး အခြားတစ်ဦးတွင် လက်မောင်း ပြတ်ရှဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း ပေါက်တော ဒေသခံများထံမှ သိရှိရသည်။
ဖုန်းမယူလာကြရန် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များကို သူရဦးရွှေမန်း သတိပေး
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၄
လွှတ်တော်တွင်း ဖုန်း Ring Tone သံများ ကြားနေရသောကြောင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ အနေနှင့် လွှတ်တော်သို့ ဖုန်းနှင့် ဖုန်းကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများ ယူမလာကြရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက သတိပေး ပြောကြားသည်။
လွှတ်တော်အတွင်း မည်သည့် ပစ္စည်းမျှ ယူမလာကြရန် စည်းကမ်း သတ်မှတ်ထားသော်လည်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက ဖုန်းများ ယူဆောင်လာပြီး လွှတ်တော် အတွင်းဖုန်း Ring Tone သံများ မြည်နေခြင်းကြောင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ယင်းသို့ သတိပေး ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“လွှတ်တော်အတွင်း အသံတွေ မြည်နေတာ အဝေးမှာ ရှိနေတဲ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌအထိ ကြားနေရတယ်” ဟု သူရဦးရွှေမန်းက ဆိုသည်။
အောက်တိုဘာလ ၄ ရက်နေ့က ကျင်းပသော ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ဖလမ်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးခွန်လိန်းသည် ချင်းပြည်နယ် အတွင်းရှိ ကျောင်းများ၊ ဆေးရုံများအတွက် ခွင့်ပြုချမှတ်ထားသည့် ရန်ပုံငွေများနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနသို့ မေးမြန်းနေစဉ် ဖုန်းသံမြည်ခဲ့သည်။
“မေးခွန်း အဆိုတင်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဖုန်းသံ ထမြည်တာတော့ လွှတ်တော်ကို ရုပ်ဆိုးစေတယ်။ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်က စည်းကမ်း မလိုက်နာဘူးဆိုတာ သက်သေပြသလို ဖြစ်သွားတယ်” ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက မှတ်ချက်ပေးသည်။
ကမ္ဘာ့အဆိပ်ပြင်း ပင့်ကူများကို ကုန်တိုက်ပေါ်မှ ငှက်ပျောသီးများတွင် တွေ့ရှိရ
[ Ref-Daily Mirror ၊ ဗြိတိန် ၊ နိုဝင်ဘာ ၄ ]
ကမ္ဘာ့အဆိပ်အပြင်းဆုံး သော ပင့်ကူများကို ယူကေရှိ စူပါမားကက်တစ်ခုမှ ဝယ်ယူလာ သော ငှက်ပျောသီးများပေါ်တွင် သွားလာနေသည်ကို တွေ့ရ ကြောင်း သတင်းများအရသိရ သည်။ နေရာအတည်တကျမနေ ဘဲ လှည့်လည်သွားလာနေတတ် သော ဘရာဇီးမျိုးစိတ်ပင့်ကူများ ကို အမေရိကန်အလယ်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်းနှင့် ပုန်းခိုနေနိုင်ရန် ငှက်ပျောပင်များတွင်လည်း နေ ထိုင်ကြောင်းသိရပြီး တခြားသော နေရာများတွင်လည်း တွေ့ရတတ် သည်။
သင်ဝယ်လိုက်တဲ့ ဖုန်းဟာ Quality ပြည့်ပြီး Original ဖုန်းစစ်မစစ်ကို မျက်လုံးနဲ့ ကြည့်ရုံနဲ့ မသိနိုင်ပါဘူး။ အခုခေတ်မှာ ပုံတူပွားပြီး ထုတ်ထားတဲ့ Clone ဖုန်းတွေကလည်း အများသားပဲလေ။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းဟာ Original ဖုန်းစစ်မစစ်ကို စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
ဥပမာ-434566 106789435
အဲဒီ ဂဏန်း ၁၅ လုံးထဲက (၇) ကြိမ်မြောက်နဲ့ (၈) ကြိမ်မြောက်ဂဏန်းဟာ-(၁) 02 (သို့မဟုတ်) 20 ဖြစ်မယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ဖုန်းက တရုတ်နိုင်ငံထုတ် အနိမ့်ဆုံး Quality ရှိတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ် ဆိုတာ ဖော်ပြနေတာပါပဲ။
(၃) 01 (သို့မဟုတ်) 10 ဖြစ်မယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ ဖုန်းကို ဖလင်န်နိုင်ငံမှာ ထုတ်လုပ်ထားတယ်ဆိုတာ ပြသနေပါတယ်။ Quality ပြည့်တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
(၄) 00, 03, 04 ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ဖုန်းက မူရင်းစက်ရုံမှာ ထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြနေပါတယ်။ အကောင်းဆုံး Quality ရှိတဲ့ဖုန်းလို့ သတ်မှတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၅) 13 ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ဖုန်းဟာ အဆိုးရွားဆုံး Quality ရှိတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ အဲဒီဖုန်းဟာ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေး အတွက် အန္တရာယ်အရှိဆုံး ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တာကြောင့် စွန့်လွှတ်ဖို့ ၀န်မလေးနေပါနဲ့။
အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေအပြင် အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ ကုဒ်နံပါတ်တွေရှိပါသေးတယ်။ ဖော်ပြထားတဲ့ ကုဒ်နံပါတ်တွေက ထင်ရှားတဲ့ နံပါတ်တွေကိုပဲ ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သင့်ရဲ့ဖုန်းက Quality ပြည့်မပြည့် Original စစ်မစစ်ဆိုတာ စမ်းသပ် စစ်ဆေးနိုင်ပြီလို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
Guide Magazine —
Benign Prostatic Hyperpl asia, BPH လို့ခေါ်တဲ့ ဆီးကျိတ်ကြီးတဲ့ရောဂါဟာ ကင်ဆာမဟုတ်ဘဲ ဆီးကျိတ်ဂလင်း ကြီးမားလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ ရောဂါဖြစ်ရပါတယ်။ Benign ဆိုတဲ့ စကားလုံးကတော့ ကင်ဆာသို့မဟုတ် ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုလိုပါ တယ်။Hyperplasiaဆိုတာကတော့ ကြီးထွားလာခြင်းလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
ဆီးကျိတ်ကြီးတဲ့ ပမာဏအတိုင်းအတာက ရောဂါလက္ခဏာကို ဆုံးဖြတ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့အမျိုးသားတွေဟာ ဆီးကျိတ်က အဆမတန်ကြီးနေပေမယ့် ဆီးသွား နိုင်နေတာမျိုးကိုလည်း တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ကုသမှုကတော့ ရောဂါလက္ခဏာပေါ်မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရပါတယ်။ ဆီးကျိတ်ကြွက်သားကို ပြေလျော့စေတဲ့ ဆေးပေးတာ၊ ဆီးကျိတ် ရဲ့ ကြီးထွားမှုနှုန်းကိုတက်စေတဲ့ ဟော်မုန်းကို ပိတ်ဆို့တာ၊ ဆီးအိမ်ကို တင်းအားလျော့စေတာ စသဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဆေးဝါးကုသမှုနဲ့ မပျောက်ကင်းတဲ့ လူနာတွေကိုတော့ ခွဲစိတ်ကုသခြင်းက ကုသအောင်မြင်စေနိုင်ပါတယ်။
တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်အလိုက် ဆေးလိပ်၊ ဆေးရွက်ကြီး ထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့မည်
ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းပြီးသော်လည်း ခုနစ်နှစ်တိုင် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိခဲ့သော ဆေးလိပ်နှင့် ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်း သောက်သုံး သူများနှင့် ရောင်းချသူများကို ပိုမို ထိရောက်စွာ အရေးယူသွားရန် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အလိုက် ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်း သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာနန်းနိုင်နိုင်ရှိန်က The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
ယင်းသို့ ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်သွင်းထားပြီး ယခုနှစ် မကုန်ခင် အပြီးသတ် ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဖွယ် ရှိကြောင်း၊ ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များ ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း လက်တွေ့ ဆောင်ရွက် လိုသူများကို ခေါ်ယူနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနများကို ညွှန်ကြားထားကြောင်း ၎င်းကထပ်လောင်း ပြောကြားသည်။
“အခုအချိန်မှာတော့ ကြီးကြပ် အဖွဲ့ဝင်တွေ ဒီဆေးလိပ် ဆေးရွက်ကြီး ထိန်းချုပ်ရေး အလုပ်တွေကို ဖိဖိစီးစီးလုပ်ဖို့ ခက်ခဲဦးမယ်။ အကျိုးသက်ရောက်မှု ပိုရှိအောင် နည်းလမ်းတွေ ထပ်ရှာသွားမှာပါ” ဟု လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာနန်းနိုင်နိုင်ရှိန်က ပြောဆိုသည်။
ယင်းအပြင် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့ရာတွင် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနတို့ ထည့်သွင်းထားပြီး အချိန်မရွေး စစ်ဆေးနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ထားသင့်ကြောင်း စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဗအုပ်ခိုင်က The Voice က ပြောကြားသည်။
“တကယ်တမ်း ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က သေချာ လုပ်ရင် ဆေးလိပ် သောက်သုံးမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်။ အခုက ဘာမှမလုပ်ကြလို့ မထိန်းချုပ်နိုင်တာပါ” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
ဆေးလိပ်နှင့် ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်း သောက်သုံးမှု ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့များတွင် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန တာဝန်ရှိသူများ၊ အစိုးရဌာန တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပြင်ပပညာရှင်များ ပါဝင်မည် ဖြစ်ပြီး ယင်းကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့သည် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဆောင်သော ဆေးလိပ်နှင့် ဆေးရွက်ကြီး သောက်သုံးမှု ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့ကြီး လက်အောက်တွင် ထားရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း ယင်းဥပဒေတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထိုင်းတွင် မြန်မာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို မုဒိမ်းကျင့်ရန် ကြိုးပမ်း၍ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်
ထိုင်းနိုင်ငံ စမူပါကန်ခရိုင် ဘန်ဖီမြို့နယ်ရှိ ထိုင်း စမ်နစ် ဖိနပ်စက်ရုံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာအမျိုးသမီး လုပ်သားတစ်ဦးကို ထိုင်းနိုင်ငံသား တစ်ဦးက မုဒိမ်းကျင့်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သဖြင့် အဆိုပါ ထိုင်းနိုင်ငံသားကို အရေးယူပေးရန် မြန်မာလုပ်သား ထောင်နှင့်ချီ စုဝေးတောင်းဆို ခဲ့ကြကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ကွန်ရက် (MWRN) မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကျော်က ပြောကြားသည်။
ဘန်ကောက်မြို့တော် အနီးတွင် တည်ရှိသည့် ဘန်ဖီမြို့တွင် နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီခန့်တွင် အဆိုပါ မြန်မာအမျိုးသမီး၏ အခန်းကို စက်ရုံ တစ်ခုတည်း လုပ်ကိုင်သူ ထိုင်းနိုင်ငံသားတစ်ဦးက ဝင်ရောက်ကာ မုဒိမ်းကျင့်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းအမျိုးသမီးက အော်ဟစ် အကူအညီ တောင်းခံမှုကြောင့် အနီးအနားရှိ မြန်မာလုပ်သားများ ရောက်ရှိ လာသဖြင့် အဆိုပါ ထိုင်းနိုင်ငံသားမှာ ထွက်ပြေးသွားကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
အဆိုပါ ထိုင်းနိုင်ငံသားသည် စက်ရုံထဲတွင် ဝင်ရောက် ပုန်းအောင်းနေစဉ် မြန်မာလုပ်သားများ ဖမ်းဆီးကာ ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ထံ အပ်နှံခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းမုဒိမ်းကျင့်ရန် ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် မြန်မာလုပ်သား ထောင်ချီ၍ စက်ရုံရှေ့တွင် စုဝေးလာပြီး အရေးယူပေးရန် တောင်းဆို ခဲ့ကြကြောင်း MWRN ထံမှ သိရှိရသည်။
မုဒိမ်းကျင့်ရန် ကြိုးပမ်းမှု ဖြစ်စဉ်များကို ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးမှ အလုပ်သမား သံအရာရှိနှင့် လုပ်သားအရေး ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘုန်းတော်ကြီးများ ဝင်ရောက် ညှိနှိုင်းပေးခဲ့သဖြင့် လူစုကွဲသွားခဲ့ကြောင်း ယင်းအဖွဲ့အစည်းထံမှ သိရှိရသည်။
မုဒိမ်းကျင့်ရန် ကြိုးပမ်းခံရသည့် အဆိုပါ မြန်မာ အမျိုးသမီးကို ဆေးစစ်ဆေးချက်များယူကာ ဘန်ဖီမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းတွင် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ဦးအောင်ကျော်က ဆိုသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မြန်မာလုပ်သား နှစ်သန်းထက် မနည်းရှိပြီး မုဒိမ်းကျင့်မှု၊ သတ်ဖြတ်ခံရမှု၊ လုပ်သား အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှုများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလေ့ ရှိသည်။
အစိုးရဌာန တစ်ခု၏ အင်တာဗျုးတွင်ဖြစ်သည်။
မေး။ ဒီဌာနရောက်တာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ ...
မေး။ နိုင်ငံခြား ဘယ်တုန်းက စသွားဖူးတာလဲ …
မေး။ ဘာကြောင့်သွားတာလဲ ...
မေး။ မသွားခင် ဘယ်လိုပြင်ဆင်သလဲ။
ဖြေ။ လိုက် ဂါရဝပြုပါတယ်။
မေး။ ပြန်လာတော့ ဘာတွေလုပ်သလဲ။
မေး။ အမြဲတမ်း ဂါရဝပြုနေတာပဲလား …
ဖြေ။ တစ်နှစ်မှာ နှစ်ရက်ပဲ ဂါရဝပြုပါတယ်။
မေး။ ဘယ်နေ့တွေလဲ …
ဖြေ။ ရုံးဖွင့်ရက်နဲ့ ရုံးပိတ်ရက်ပါ။
မေး။ ဘာ ကိုးကွယ်လို့လဲ …
ဖြေ။ ဆိုင်ရာ ပိုင်ရာတွေကို ကိုးကွယ်ပါတယ်။
မေး။ ဘယ်တွေရောက်ဖူးသလဲ …
ဖြေ။ လွှတ်သမျှနိုင်ငံ အကုန်ရောက်ဖူးပါတယ်။
မေး။ လုပ်သက်တစ်လျှောက်မှာ ခွင့်ယူဖူးသလား၊ဘယ်လိုခွင့်လဲ …
ဖြေ။ ဟုတ် … ယူဖူးပါတယ် .. လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အခွင့်ကောင်း၊အခွင့်အရေး … အားလုံးယူဖူးပါတယ်။
မေး။ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ငြင်းဖူး၊ ရှောင်ဖူးတာရှိသလား …
ဖြေ။ နိုင်ငံခြားလွှတ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ တစ်ခါမှ မငြင်းဘူး၊မရှောင်ဘူးပါဘူး။
မေး။ နယ်သွားဖူးသလား …
မေး။ လုပ်သက်တစ်လျှောက်မှာ နယ်သွားဖူးသလား …
ဖြေ။ ဟုတ် … ခွင့်ယူပြီး ဘုရားဖူးသွား၊အပျော်ခရီးသွားသဘောမျိုးတော့ ရောက်ဖူးပါတယ်။
မေး။ ဘာတွေတက်ထားပြီးပြီလဲ …
ဖြေ။ လူကြီးအိမ်တွေ၊ သင်တန်းတွေ၊ ပြဿနာတွေ … အကုန်တက်ထားပြီးပါပြီ။
မေး။ အလုပ်မှာ အဆင်ပြေလား …
ဖြေ။ လူကြီးတွေနဲ့တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။
မေး။ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ အတက်၊ အကျ ဘာတွေကြုံခဲ့ဘူးသလဲ …
ဖြေ။ အဓိက တက်တာကတော့ ရာထူး ပါပဲ။
မေး။ ကျတဲ့အပိုင်းကရော …
ဖြေ။ … အမြဲတမ်း ကျတတ်တာတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အဲဒီအတွက် ကိုယ့်ကိုယ် အမြဲတမ်းသတိထားပါတယ်။
မေး။ စိတ်ဓါတ်ကျတတ်တာလား …
ဖြေ။ မဟုတ်ပါဘူး၊ လူလည်ကျတတ်တာပါ။
မေး။ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ အကျွမ်းကျင်ဆုံးဘာလုပ်တတ်သလဲ …
ဖြေ။ ပြဿနာ လုပ်တတ်ပါတယ်။
မေး။ အင်္ဂလိပ်စာ နဲ့ အထွေထွေဗဟုသုတနည်းနည်း မေးမယ်နော် ...
မေး။ "Gifted Child" ဆိုတာ သိလား ...
ဖြေ။ ။ဟုတ်၊လက်ဆောင်ပေးခြင်းခံရတဲ့ ကလေးပါ။
မေး။ IT ဆိုတာသိတယ်နော် ...
ဖြေ။ ဟုတ်၊ "ထိုအရာ၊ ၎င်း၊ ယင်း" ပါ။
မေး။ မဟုတ်ဘူးလေ၊ Information Technology ကိုပြောတာ.......
ဖြေ။ အော် ... ဟုတ်။
မေး။ အခုခေတ်က Information Technology ခေတ်လေ၊အဲဒီInformation Technology ဆိုတာကိုဘယ်လိုနားလည်ထားသလဲ။
အဲဒါကို ကိုယ့်ရဲ့တက်လမ်းအတွက် ဘယ်လိုအသုံးချမလဲ …
ဖြေ။ ဟုတ်။ သူများမကောင်းကြောင်း၊ ကိုယ်ကောင်းကြောင်းသတင်းအချက်အလက်တွေကို သူများတွေ၊ အထူးသဖြင့်
လူကြီးတွေသိအောင် နည်းပေါင်းစုံနဲ့လုပ်တဲ့ ပညာပါ။ ဒါကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အသုံးချနိုင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ တက်လမ်း ကောင်းမွန်တတ်ပါတယ်။
မေး။ လုပ်ငန်းခွင် နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လောက်သိထားသလဲ ...
ဖြေ။ လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ "ခွင်" တွေ အားလုံးကိုသိထားပါတယ်။
မေး။ 360˚ Assessment ဆိုတာ သိလား …
ဖြေ။ သင်္ချာမှာ အားနည်းလို့ မသိပါဘူး။
မေး။ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သိထားတာ ၂ခုလောက် ပြောပြပါလား …
ဖြေ။ လူကြီးတွေနဲ့ သိပါတယ်၊ အလိုက် သိပါတယ်။
မေး။ နောက်ဆုံး အနေနဲ့အရေးအကြီးဆုံး မေးခွန်းတစ်ခုမေးမယ် ...
ဖြေ။ ဟုတ် ...
မေး။ အခုရာထူး မရရင် ဘာလုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားသလဲ …
ဖြေ။ ပြဿနာလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။
တယ်လီဖုန်းသံ ၀င်လာသည်။အိမ်တွင် ခွေးမှလွဲပြီး ဘယ်သူမှမရှိ
တစ်ဖက်လူမှ > ‘အခုစကားပြောနေတာဘယ်သူလ’ဲ
အေး သေချာနားထောင် ၀ တ ချောင်း ငင်တ သတ် ၀ုတ် ၀ုတ်
cr >> မောင်ကောင်းထိုက်
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဘင်္ဂါလီအရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အဆိုတင်သွင်းရာတွင် လွှတ်တော်၌ ဆွေးနွေးခြင်း မပြုရန်နှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း မပြုရန် ဘူးသီးတောင် မဲဆန္ဒနယ် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင် ကန့်ကွက်၊ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်နေသည့်အတွက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သတိပေး
(ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၏ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင် မဲဆန္ဒနယ် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင်)
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဘင်္ဂါလီအရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်၊ ဒေါ်ခင်စောဝေက နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၌ အဆိုတင်သွင်းသည်။ ၎င်းအဆိုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခြင်း မပြုရန်နှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း မပြုရန် ဘူးသီးတောင် မဲဆန္ဒနယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင်က ကန့်ကွက်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင် မဲဆန္ဒနယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စောဝေက ''ရခိုင်ပြည်နယ်၏ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားကို ရှေးရှုပြီး ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသတွင် ဘက်စုံ၊ ထောင့်စုံမှ ထိရောက်သော ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းထားသည့် လုံခြုံရေး၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး အစီအမံများကို ယခင်ကထက် သာလွန်ကောင်းမွန်သည့် အစီအမံများဖြင့် အမြန်ဆုံးချမှတ် စတင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း'' အဆိုကို တင်သွင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုတွင် ''ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အမျိုးသမီးစုများအား ဘင်္ဂါလီများက တိုက်ခိုက်မှုများ ရှိခဲ့သဖြင့် သေဆုံးခဲ့ရသည့် အကြောင်းအရင်းများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နေ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများ၏ လုံခြုံရေး အရေးကြီးနေသည့် အခြေအနေများ၊ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံ နယ်စပ်တစ်လျှောက် နယ်စပ်ခြံစည်းရိုးများကို ပြုလုပ်ပေးရန် တိုက်တွန်းချက်များကိုသာ အဓိက တင်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
၎င်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဘူးသီးတောင် မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင်က ကန့်ကွက်ရာတွင် ''ဒေါ်ခင်စောဝေ အဆိုပါ တင်ပြချက်များသည် ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူမျိုးစုတစ်ခုကိုနှိမ်ပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံပြီး ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်လိုသည့် သဘောဆောင်သော အဆိုတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း၊ ယနေ့အချိန်တွင် နိုင်ငံတော်သည် ငြိမ်းချမ်းစွာ တူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ရေး၊ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ဘာသာပေါင်းစုံ တူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း'' ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးခြင်း မပြုရန်နှင့် မှတ်တမ်းတင် မပြုရန် ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ကန့်ကွက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်္ဃန်းကျွန်း မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်က ပါဝင်ဆွေးနွေးရာတွင် ''အဆိုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကန့်သတ်ချက်များကို နည်းဥပဒေ ၁၅၇ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားကြောင်း၊ အဆိုကို ဒေါ်ခင်စောဝေ တင်သွင်းပြီး ဦးအေးမောက်က ထောက်ခံကြောင်း၊ ဒုဝန်ကြီးက ပြန်ရှင်းပြီး မှတ်တမ်းတင်ရန် ပြောပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းအချိန်တွင်မှ ကန့်ကွက်ကာ မှတ်တမ်းမတင်ရန် ပြောခြင်းသည် နည်းဥပဒေတွင် ခွင့်ပြုမထားကြောင်း၊ အဆိုတင်သွင်းခွင့် မပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နည်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၅၉ အရ ဥက္ကဋ္ဌ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပုဒ်မ ၁၅၉ အား ဆန့်ကျင်ကာ အဆိုကို ကန့်ကွက်ခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း မပြုရန် တင်ပြခြင်းတို့သည် လွှတ်တော်၏ နည်းဥပဒေများကို ဆန့်ကျင်ရုံသာမက ဥက္ကဋ္ဌ၏ လွှတ်တော်၏ ထိန်းကျောင်းမှုကိုပါ ထိခိုက်နိုင်သဖြင့် ဦးရွှေမောင်၏ ကန့်ကွက်မှုကို ပယ်ဖျက်ပေးရန်'' ဟု တင်ပြခဲ့သည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက ပြန်လည် ဆွေးနွေးရာတွင် ဦးသိန်းညွန့် တင်ပြချက်သည် ကောင်းမွန်ကြောင်း၊ မိမိအနေဖြင့်လည်း ဦးသိန်းညွန့် ပြောကြားသကဲ့သို့ပင် ပြောကြားရန်ရှိကြောင်း၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး အနေဖြင့် သာမန် အရပ်သားများထက် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများအား လေးစားလိုက်နာရန် လိုကြောင်း၊ အဆိုတင်သွင်းပြီး၊ အဆိုထောက်ခံပြီး၊ အဆိုပြန်လည် ရှင်းလင်းပြီးမှ ယခုလို ကန့်ကွက်လာသည့် ဘူးသီးတောင် မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးရွှေမောင်အား လွှတ်တော်မှ မှတ်တမ်းတင် သတိပေးကြောင်း ပြောကြားသည်။
ဦးရွှေမောင်သည် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင် မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ကိုယ်စားပြု ရွေးချယ်ခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
စီးကရက်ဖြန့်သမား စိတ်ဖောက်ပြန်၍ လူ ၂ ဦးသတ်၊ ၂ ဦးဒဏ်ရာရ
လူ ၂ ဦးအားသတ်ဖြတ်ကာ အခြား ၂ ဦးဒဏ်ရာရရန် စိတ်လိုလက်ရ တိုက်ခိုက်သူ စီးကရက်ဖြန့်သမား အမျိုးသားကြောင့် တမန်မီလာ တီ(Taman Melati) လမ်း၏နံနက်ခင်းတိတ်ဆိတ်မှုလွင့်ပျောက်သွားခဲ့သည်။
အသက် ၂၆ နှစ်အ ရွယ်အမျိုးသားသည် ဂွမ်ဘတ်ပူတာရထားမှတ် တိုင်(Gombak Putra LRT terminal) သို့စီးကရက် ထုပ်များကိုဖြန့်ရန် သူ၏ကားဖြင့် ထွက်လာခဲ့ပြီး နံနက် ၁၁ နာရီ၊ မိနစ် ၂၀ ခန့်တွင် မိနစ် ၄၀ ကြာမြင့် သည့် အကြမ်းဖက်ရိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။သတိပေးခြင်းမရှိဘဲ ၄င်းသည် ရမ်ဘိုဓါးဆွဲထုတ်ကာ ဆိုင်ခန်းပိုင် အသက် ၄၉ နှစ်အရွယ်လောင်ဆွေးလင်း(Lau Siew Ling)နှင့်အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် သူမ၏ လက်ထောက် ဆူလျံတီဂျိုဟာရီ(Sulianti Johari)တို့ကို ခုတ်ထစ်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် သူ၏ကားဖြင့် ဂျလန်း ပယ်တာဟာနန်(Jalan Pertahanan)ဘက် သို့မောင်းထွက်သွားခဲ့ပြီး၊ မင်လာတီရထား (Melati LRT)မှတ်တိုင်အနီး ၂ ကီလိုမီတာအကွာတွင် အခြားယာဉ်တစ်စီးနှင့်တိုက်မိသည်။
အခြားကားပိုင်ရှင်အသက် ၄၈ နှစ်အရွယ် လီကာ့ ဂီ(Lee Kah Ghee)သည် ကားကိုစစ်ဆေးရန် ကားထဲမှ ထွက်လာသည်နှင့် စီးကရက်ဖြန့်သမားက ရှုတ်ထွေးနေသောလမ်းမပေါ်တွင် သေလုမျောပါးဖြစ်အောင် ဓါးဖြင့် အကြိမ်ပေါင်းများစွာထိုးခဲ့သည်။
စီးကရက်ဖြန့်သမားသည် ကားအတွင်းသို့အမြန်ဆုံးပြေးဝင်ကာ မောင်း ထွက်ခဲ့ပြီး၊ မီတာအနည်းငယ် အရောက်တွင် ကောလိပ်ကျောင်းသား တစ်ဦးမောင်းသည့်ကားနှင့် ၀င် တိုက်ခဲ့သည်။
စီးကရက်ဖြန့်သမားသည် ကားအတွင်းမှပြေးဆင်းကာ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသား ကွန်ချွန်တိုင်း (Kwan Chun Tai)ကို ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ကျောင်းသားသည် စိတ်ရူးထနေသော လူသတ်သမား လက်မှလွတ်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ စီးကရက်ဖြန့်သမားသည် ကျောင်းသားကို မှီအောင်လိုက်ပြေးကာ ဂျလန်း တွမ်ဘူဟန် (Jalan Tumbuhan)အရောက်တွင် ဓါးဖြင့်ထပ်ထိုးသည်။
၀ိုင်းကြည့်နေသည့်လူအုပ်က စီးကရက်ဖြန့်သမားကို ၀ိုင်းပိတ်ထားကြ သည်ဟု မြို့တော်လက်ထောက် စီအိုင်ဒီချုပ်က ရှင်းပြသည်။ ‘စီးကရက်ဖြန့်သမားက လက်နက်မရှိတော့ဘူး။ သူ့ကိုဝိုင်းရိုက်ပြီးဖမ်းချုပ်တယ်။ ရဲတွေ ရောက်လာတော့ ဖမ်းလိုက်တယ်။ စိတ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးဖို့နဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ဖို့ သူ့ကို ကွာ လာလမ်ပူဆေးရုံ ပို့ထားတယ်’ဟု အရာရှိက ဆက်ပြောသည်။
စီးကရက်ဖြန့်သမားသည် ရုတ်တရက်လှုပ်ရှားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ ၄င်းကိုထိန်း ချုပ်မှုအောက်တွင် စောင့်ကြည့်ထား ကြသည်။
‘သူက အဖွဲ့တစ်ခုခုကလို့ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟုတ်မဟုတ်ဖော်ထုတ်ရဦးမယ်’ဟု အရာရှိက ဆက်ပြောသည်။ စီးကရက်ဖြန့် သမားသတ်ခဲ့သောအလောင်း ၂ လောင်းကိုစစ်ဆေးရန် ကွာလာလမ်ပူ ဆေးရုံရှိ ရင်ခွဲရုံသို့ပို့ထားသည်။
လူသတ်မှုဆိုင်ရာပုဒ်မ ၃၀၂ နှင့် အန္တာရာယ်ရှိသောလက်နက်ဖြင့်နာ ကျင်စေ မှုဆိုင်ရာပုဒ်မ ၃၂၆ အရ စီးကရက်ဖြန့်သမားကို အမှုဖွင့်စစ်ဆေးမည်ဟု အရာရှိက ထည့်သွင်းပြောသည်။
အခင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းပေးပို့လိုလျှင် ရဲလိုင်း 03-2115 9999 သို့မဟုတ် နီးစပ်ရာ ရဲစခန်းသို့ ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
The Star News (Malaysia)
[Ref-AFP ၊ နယူး ဒေလီ ၊ နိုဝင်ဘာ ၃ ]
အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၌ အမြန်ရထားတစ်စီးက ခရီးသည် များအကြားသို့ ဝင်ရောက်တိုက်မိ ခဲ့သည်။ ခရီးသည်များမှ ရထား မီးလောင်သည်ဆို၍ ရထားတွဲ ထဲမှ ထွက်ပြေးကြစဉ် ယခုကဲ့သို့ တိုက်မိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရထား တိုက်၍ အနည်းဆုံး ရှစ်ဦးသေ ဆုံးကြောင်း သက်ဆိုင်ရာမှပြော ကြားခဲ့သည်။အန္ဒရာပရာဒတ်ရ်ှပြည်နယ် ဂို့လမ်ဘူတာ၌ တိုက်မိခဲ့ခြင်းဖြစ် ပြီး လူများစွာလည်း ဒဏ်ရာရရှိ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရထားတွဲမီးလောင်မှုဖြစ်ပွား သည်ဟု ကောလာဟလသတင်း များပေါ်ထွက်ပြီးနောက် ရထား ပေါ်မှ ခရီးသည်များ ရထားလမ်း ပေါ်သို့ ပြေးလွှားဆင်းလာကြစဉ် အမြန်ရထားက တိုက်မိခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။
အလက်ပီ- ဒမ်ဘက်အမြန် ရထားက အရေးပေါ်ရထားတွဲမှ ခရီးသည်များအား ဆင်းပြေးလာ ကြစဉ် ရိုင်ဂါ- ဗီဂျေဝါဒရထားက အခြားလမ်းမှလာစဉ် ဖြတ်၍တိုက် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မီးရထားဌာန မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဂျေ ပီမီရှရာက အိန္ဒိယရုပ်သံဌာနသို့ ပြောပြခဲ့သည်။
အသက် (၇)အရွယ်ခန့်ရှိ စကားမပြောတတ်သည့် မိန်းကလေးတစ်ဦးအား လက်ပံတန်း - ရန်ကုန် ခရီးသည်တင်ယာဉ်ပေါ်၌တွေ့ရှိ
၄.၁၁.၂၀၁၃ရက်နေ့ ၂၀၀၀အချိန် ရန်ကုန်ဘက်မှပြည်ဘက်သို့
မောင်းနှင်လာသော လက်ပံတန်း - ရန်ကုန်ခရီးသည်တင်ယာဉ် န/၄၈၈၆ဟိုင်လတ်အဖြူရောင်ယာဉ်ပေါ်တွင် အသက်(၇)နှစ်အရွယ်၊ စကားမပြောတတ်မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးမှာ အုပ်ထိန်းသူမပါဘဲ ငိုးကြွေးနေကြောင်း မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ဆက်သွားတော့ကျေးရွာ၊ စမ်းချောင်းပေါက်မှတ်တိုင်အရောက်တွင် သိရှိရသဖြင့် ယာဉ်မောင်းဦး အောင်ကျော်လင်းမှ မှော်ဘီရဲစခန်းသို့ လာရောက်ပို့အပ်သဖြင့် မှော်ဘီရဲစခန်းမှ လက်ခံထားရှိပြီး အခြားတိုင်း/ပြည်နယ်ရှိ ရဲစခန်းအသီးသီးသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်း
လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနက လျှပ်စစ် မီတာခများ တက်ရန် ပြည်သူလူထုကို ကနဦး ရှင်းမပြဘဲ မီတာခ တိုးမြှင့်လိုက်ခြင်းသည် အာဏာရှင်စနစ်၏ အမွေဆိုး အရိပ်အငွေ့ မကုန်သေးကြောင်း အမျိုးသားဒီမို ကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ အကြောင်းအရာကို နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်နေ့ လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ (၁၂) တွင် သတင်းမီဒီယာများနှင့် မိနစ် ၂၀ ခန့် တွေ့ဆုံစဉ် သတင်းထောက်တစ်ဦး၏ မေးမြန်းမှုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ပြည်သူတွေက အတိုက်အခံ လုပ်နေတဲ့သူတွေပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ အခြေအနေ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟာကို ရှင်းပြရင် နားလည်တဲ့ သူတွေပါ” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
လျှပ်စစ်မီးသည် အများပြည်သူ သုံးစွဲနေသည့်အရာ ဖြစ်သောကြောင့် တက်သင့်သည် အကြောင်းအရာ အချက်အလက်များကို ခိုင်ခိုင်လုံလုံ ရှင်းပြရမည် ဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည် အနာဂတ်အတွက် ပြည်သူတွေ ကူညီ အနစ်နာ ခံပေးရမည် စသဖြင့် ရှင်းပြသင့်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရှင်းပြသည်။
“ပြည်သူတွေကို တလေးတစားလုပ်ရင် ပြည်သူက အသိအမှတ် ပြုလိမ့်မယ်။ လုပ်ချင်တာ လုပ်ပြီးမှ လက်ခံလိုက် ဆိုတာမျိုးက မဖြစ်သင့်ဘူး” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှစတင်ကာ အိမ်သုံးမီတာ တစ်ယူနစ်လျှင် ယူနစ် ၁၀၀ အောက်အထိ သုံးစွဲပါက တစ်ယူနစ် ၂၅ ကျပ်၊ ယူနစ် ၁၀၀ အထက် သုံးစွဲပါက တစ်ယူနစ် ၃၅ ကျပ် ကောက်ခံနေရာမှ ယူနစ် ၁၀၀ အောက် ၃၅ ကျပ်၊ ယူနစ် ၁၀၀ အထက် ကျော်လွန်သည့် ပမာဏကို တစ်ယူနစ်လျှင် ကျပ် ၅၀ နှုန်းဖြင့် ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအတွက် တစ်ယူနစ်လျှင် ၇၅ ကျပ် မှ ၁၀၀ ကျပ်ထိ တိုးမြှင့် ကောက်ခံမည် ဖြစ်ကြောင်း လျှစ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနက အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး မီတာများသည် ယူနစ် ငါးထောင်ထိ အသုံးပြုပါက ၁၀၀ ကျပ်သာ ကောက်ခံမည် ဖြစ်သော်လည်း ယင်းပမာဏ ကျော်လွန်သည့် ယူနစ်များကို တစ်ယူနစ်လျှင် ၁၅၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါရှိသည်။
အဆိုပါ လျှပ်စစ်မီတာခများ တိုးမြှင့်လိုက်သည့်အပေါ် ဝေဖန်မှု များစွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး မီတာခ တိုးမြှင့်မှုအပေါ် ကန့်ကွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရန်လည်း အဖွဲ့အစည်း အချို့က လုပ်ဆောင်နေသည်။
ထိုင်းမင်းသမီးရဲ့မြင်းနဲ့ ဒေါ်စုရဲ့မြင်း ဘယ်သူအသာစီးရရှိမလဲ
ထိုင်းဘုရင့်မြေးတော်မလေး အခု ဆီးဂိမ်းမှာ မြင်းစီးဝင်ပြိုင်မယ်
သူကတော့ (၂၇) ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းစ် ပြိုင်ပွဲရဲ့ မြင်းစီး အားကစား နည်းမှာ ၀င်ပြိုင်မယ့် ထိုင်းဘုရင် Bhumibol Adulyadej ရဲ့ မြေးမတော် Princess Sirivannavari ဖြစ်ပါတယ်။
စွဲဆောင်မှု ရှိပြီး Fashion ကျကျ ၀တ်ဆင် တက်တဲ့ သူဟာ Forber မဂ္ဂဇင်းကပြုလုပ်တဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် "20 Hottest Young Royals" မှာ နံပါတ် ၁၆ ရခဲ့ဖူး ပါတယ်။
ထို့အပြင် အားကစားနည်း များကို စိတ်ဝင်စားပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဖိလစ်ပိုင်မှာ ကျင်းပတဲ့ (၂၃) ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းစ် ပြိုင်ပွဲရဲ့ ကြက်တောင် အားကစား နည်းမှာ ထိုင်းနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု အဖြစ် သွားရောက် ခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းမင်းသမီးလေးရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုနဲ့ ဒေါ်စုပိုင်တဲ့မြင်း(အလှူရထား)ပြိုင်ပွဲဝင်မှု တို့ကြောင့် ဆီးဂိမ်းမှာ မြင်းပြိုင်ပွဲကို အားပေးသူ အတော်ကလေး များလာနိုင်တယ် လို့ Red Star က ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ထိုင်းမင်းသမီးရဲ့မြင်းနဲ့ ဒေါ်စုရဲ့မြင်း ဘယ်သူအသာစီးရရှိမလဲ ဆိုတာကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခု ဖြစ်နေပါပြီ။
အားပေးမယ့်သူ များမလား မများဘူးလား ဆိုတာ ဒီမင်းသမီးဓါတ်ပုံလေးကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ သိနိုင်ပါပြီ။
အမြန်လမ်းမကြီးပေါ် ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်တစ်စီးတိမ်းမှောက် နှစ်ဦးသေ၊ သုံးဦးဒဏ်ရာရ
မင်္ဂလာဆောင်အပြန် လူငါးဦး ပါ ကိုယ်ပိုင်ပရာဒိုကားတစ်စီး ယာဉ်မောင်းအိပ်ငိုက်၍ တိမ်းမှောက်သဖြင့် ယာဉ်မောင်း အပါအဝင် နှစ်ဦး သေဆုံးပြီး သုံးဦး ဒဏ်ရာပြင်း ထန်စွာရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး တောင်ငူခရိုင် အုတ်တွင်း မြို့နယ်တွင် နိုဝင်ဘာ ၄ ရက် နံနက်ပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မန္တလေးမြို့မှ ရန်ကုန်သို့အပြန် ယာဉ်မောင်း ခင်မောင်ကျော် (၄၄ နှစ်) ကျောင်း တော်ရာ ပွင့်ဖြူမြို့နယ် မောင်းနှင် လာသော ကိုယ်ပိုင်ပရာဒိုကား အမှတ် ၃ဃ/--- သည် နိုဝင်ဘာ ၄ ရက် နံနက် ၅ နာရီက အမြန် လမ်းမကြီး အုတ်တွင်းမြို့နယ် မိုင် တိုင်အမှတ် (၁၂၁/၂နှင့် ၁၂၁/၃) အကြားအရောက် ယာဉ်မောင်း အိပ်ငိုက်ရာမှ လမ်းလယ်ရှိကွန် ကရစ်ကျွန်းတိုင်များကို တိုက်မိပြီး ယာဉ်တိမ်းမှောက်သွားသည်။
ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ယာဉ် မောင်း ခင်မောင်ကျော်၊ ဦးဇော်လွင် ၊ ဒေါ်ထွေးယုံ၊ ဒေါ်သိန်းသိန်းနှင့် မဖူးပွင့်သက်တို့သည် ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာများရရှိကာ ဖြူးပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီး အရောက်တွင် ယာဉ်မောင်း ခင်မောင်ကျော်နှင့် ဦးဇော်လွင်တို့နှစ်ဦးသည် ဒဏ်ရာ များဖြင့်သေဆုံး သွားကြပြီး ကျန် လူနာများကို ရန်ကုန်မြို့သို့ ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း သိရသည်။
ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုသတင်းရလျှင်ရချင်း အမြန်လမ်းမကြီး ၁၁၅ မိုင်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း အရေးပေါ်ရှေးဦးပြုစုခြင်းစခန်းမှ လူနာတင်ယာဉ်တစ်စီးနှင့် တာဝန်ခံ ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်နှင့် အဖွဲ့၊ ၁၂၂ မိုင်ရှိ အာရောဂျံခြံမှ ဦးကိုကိုကြီး နှင့် ကုသိုလ်ဖြစ် လူနာတင်ယာဉ် တစ်စီးနှင့် ဗောဓိကုန်းရဲစခန်းမှ လူနာတင်ယာဉ်တစ်စီးတို့ ရောက်ရှိ ကြပြီး လူနာများကို ဖြူးဆေးရုံကြီးသို့ တင်ပို့ခဲ့ကြသည်။ အမှုကို အမြန် လမ်းမကြီး ဗောဓိကုန်းရဲစခန်းက အရေးယူထားကြောင်း သိရ သည်။
ကင်ဆာရောဂါ နှင့် ကျန်းမားရေးဆောင်းပါးများ ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်း ရဲ. အကျိုးကျေးဇူးများ
အောက်မှာ ဖော်ပြထားတာကတော့ ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်း အကျိုးကျေးဇူးတွေပါ။
ဆေးလိပ်သောက်တဲ့သူ ၂ ယောက်မှာ ၁ ယောက်က ဆေးလိပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေကြောင့် ဘဝသက်တမ်းတိုပါတယ်။ မလေးရှားမှာ ဆေးလိပ်ကြောင့် နှစ်စဉ် လူ ၅ ထောင်ခန့် သေဆုံးပါတယ်။
၂။ အဆိပ်အတောက်များမှ ကင်းဝေခြင်း။
ဆေးလိပ်ငွေ့မှာ ဓါတ်ပစ္စည်းပေါင်း ၄ သောင်းကျော်ပါပါတယ်။ အဲဒီအထဲက ၆၃ မျိုးက ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
၃။ ရောဂါများမှ ကာကွယ်ခြင်း။
ဆေးလိပ်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ရောဂါအမျိုးအစားပေါင်း ၄၀ ကျော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆုတ်ကင်ဆာ၊ နှလုံး ရောဂါ၊ နာတာရှည်လေပြွန်ရောင်ခြင်း၊ အဆုပ်ပွရေဝင်ရောဂါ၊ လေဖြတ်၊ အစာအိမ်နာ အစရှိသဖြင့် ရောဂါတွေပါ။
ဆေးလိပ်မသောက်သူတွေကတော့ ဆေးလိပ်သောက်သူထက်စာရင် ချောင်းဆိုး၊ အအေးပတ်၊ အဆုတ်ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းနဲ့ အခြားအသက်ရှုလမ်းကြောင်းရောဂါတွေ အဖြစ်နဲတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါအပြင် ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းကြောင့် အမျိုးသားတွေမှာ တခြားအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိပါသေးတယ်။
၅။ အခြားသူများအား ကာကွယ်ခြင်း။
ဆေးလိပ်သောက်သူကိုသာမက အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေ၊ သင့်ရဲ.အိမ်သားတွေ၊ ကလေးတွေကိုပါ ရောဂါပေးပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ ကိုယ်တိုင်မသောက်ပေမဲ့ (passive smoker) သောက်တဲ့ သူ ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေအတိုင်း ခံစားရတက်ပါတယ်။
သင်ဟာ သင့် ကလေးတွေ၊ ညီ/ညီမတွေရဲ. စံပြပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ လူကြီးမိဘ ဆေးလိပ်သောက်တက်ရင် ကလေးတွေလဲ ဆေးလိပ်သောက်နိုင်ခြေပိုများပါတယ်။
၇။ ကျန်းမာတဲ့ ကလေးတွေဖြစ်နိုင်ခြင်း။
ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ မိဘကြောင့် ကလေးတွေဟာ အဆုပ်ပွရောဂါအပြင် နားနှာခေါင်းလည်ချောင်း ရောဂါပိုးဝင်ရောက်တက်ပါတယ်။ သင်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းကြောင့် သင့်ကလေးတွေကို ရောဂါဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်သူတွေဟာ အလွယ်တကူ မောပန်းလွယ်တက်ပါတယ်။
၉။ အရသာနဲ့ အနံ့ခံအာရုံ ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်း။
ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်တာနဲ့ အရသာနဲ့ အနံ့ခံအာရုံတွေ ပုံမှန်အတိုင်း ကောင်းမွန်လာပါတယ်။
၁၀။ ကျန်းမာတဲ့ အရေပြားပိုင်ရှင်ဖြစ်ခြင်း။
ဆေးလိပ်သောက်တဲ့သူတွေဟာ လုံလောက်တဲ့ oxygen အောက်ဆီဂျင် မရတဲ့အတွက် အသားအရောင်မွဲခြောက်ပြီး ဆံပင်ဖြူမြန်ကာ အသက်ကြီးရင့်လွယ်ပါတယ်။
၁၁။ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့ လေရခြင်း။
ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်တော့ ရှုတဲ့လေက ပိုမို သန့်ရှင်းလန်းဆန်းလာပါတယ်။ ဆေးလိပ်ကြောင့် ဆီးသွားတဲ့အခါနဲ့ ချွေးထွက်တဲ့အခါ ရရှိတဲ့ အနံ့ဆိုးတွေပါ ကင်းဝေးသွားပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်သူရဲ.သွားတွေ ဝါညစ်ညစ်နဲ့ အရောင်ပြောင်းလာတဲ့အတွက် အပြုံးတွေလဲ မလှပပါဘူး။ ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်တာနဲ့ စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အပြုံးလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်လာနိုင်မှာပါ။
၁၃။ အဝတ်အစားနဲ့ ဆံပင်များမှာ အနံ့စွဲခြင်းမှ ကင်းဝေးခြင်း။
ဆေးလိပ်သောက်သူရဲ. ဆံပင်နဲ့ အင်္ကျီတွေမှာ ဆေးလိပ်အနံ့ဆိုတွေ စွဲကပ်နေတက်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်ရင် ဒီအနံ့ဆိုးတွေ ကင်းသွားတာကို သိသိသာသာ သတိထားမိနိုင်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်တစ်ဗူးနေ့စဉ်သောက်ရင် တစ်နှစ်မှာ မလေးငွေ ၃ ထောင် (မြန်မာငွေ ၇ သိန်းခွဲလောက်) ကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။ မိမိနေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံငွေကြေးနဲ့ တွက်ကြည့်ပါ။ ဆေးလိပ်မသောက်ရင် ဒီငွေတွေ စုမိမှာပါ။ ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်ပါက ဒီငွေတွေကို တခြားကျေးဇူးရှိမယ့်နေရာတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်တာပေါ့။
၁၅။ သန့်ရှင်းတဲ့ ဝန်းကျင်။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ လေထုညစ်ညမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့အတွက် ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်ရင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုကို အားပေးရာ ရောက်ပါတယ်။
Guidelines to quit smoking, Health Education Division, Ministry of Health, Malaysia.
မိန်းကလေးငယ်အား အဓမ္မကျင့်ရန် ကြံစည်ခဲ့သူကို ရဲများက ဖမ်းဆီးရမိ
ကရင်ပြည်နယ်၊ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်အတွင်း အသက် ၁၁အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးကို အဓမ္မပြုကျင့်ရန် ကြံစည်ခဲ့သူတစ်ဦးကို ယမန် နေ့က ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တွင် ဖမ်းဆီးရမိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ပြည်နယ်ရဲမှူးကြီး ဦးစိန်လွင်က ကေအိုင်စီသို့ အတည်ပြု ပြောဆို သည်။
“တရားခံကိုတော့ မနေ့ နေ့လည်က ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှာ ဖမ်းမိထားလိုက်ပါပြီ။ သူ့ကိုတော့ တရားဥပဒေအရ အရေးယူမှုတွေ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားရမယ်။”ဟု ရဲမှူးကြီးဦးစိန်လွင်က ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ အသက် ၂၅နှစ်အရွယ်ရှိ ကျောက်တောင်ရွာသား ဖိုးထောင်ဆိုသူက ကော့တာဟိုးရွာသူ အဆိုပါ မိန်းကလေးငယ်ကို လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ အောက်ရေပူကျေးရွာအုပ်စုဝင် ကျောက်တောင်နှင့် ကော့တာဟိုးရွာအကြားတွင် အောက်တိုဘာလ ၂၉ရက်၊ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ည ၇နာရီအချိန်က အဓမ္မပြုကျင့်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြောင်း အမည်မဖော်လိုသူ ကျောက်တောင်ရွာသားက ပြောသည်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ ယင်းသို့ အဓမ္မကျင့်ရန် ကြိုးစားနှိပ်စက်နေချိန်တွင် နယ်ခြားစောင့်တပ်(ဘီဂျီအက်ဖ်)မှ စောရွှေကရင်နှင့် ဇနီးဖြစ်သူတို့က တွေ့မြင်သွားသည့်အတွက် ကျူးလွန်သူမှာ ထိုနေ့က ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ကျောက်တောင်ရွာသား ဖိုးထောင်မှာ ယခင်က ထိုင်းနိုင်ငံ၊ တာ့ခ်ခရိုင်တွင် ၃နှစ်ခန့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပြီး ယခုလို ရာဇ ၀တ်မှု ကျူးလွန်ပြီးနောက် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ တာ့ခ်ခရိုင် မဲဆောက်မြို့သို့ တိမ်းရှောင်ခဲ့ရာ နှစ်ဖက်နိုင်ငံမှ နယ်စပ်တာဝန်ရှိသူများ၏ ၀ိုင်း ၀န်းကြိုးပမ်းမှုဖြင့် ၎င်းအား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မြ၀တီမြို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် နီးစပ်သူများ၏ ပြောပြချက်အရ သိရ သည်။
အခင်းဖြစ်ပွားမှုကြောင့် အဆိုပါကျေးနယ်ဝန်းကျင်အတွင်း ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားလာမည်ကို စိုးရိမ်၍ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များနှင့် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များက အချိန်မှီ လာရောက်ကာ ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့သော်လည်း လက်ရှိအချိန်ထိမူ ကျောက် တောင်ရွာအနီးရှိ ထီလုံကျေးရွာမှ ရဲဝန်ထမ်းများနှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ရွာအနီးဝန်းကျင်တွင် လုံခြုံရေးယူကာ စောင့် ကြပ်နေရသေးကြောင်း ပြည်နယ်ရဲမှူးကြီးက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
ပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရသူ မိန်းကလေးငယ်မှာ နှိပ်စက်ခံထားရသည့် ဒဏ်ရာကြောင့် ဘားအံဆေးရုံတွင် သွားရောက်ဓာတ်မှန်ရိုက်ခံခဲ့ ပြီး ယခု သူမ၏ရွာသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိနေပြီးဖြစ်ကြောင်း နီးစပ်သူများက ပြောဆိုသည်။
နှစ်ပေါင်း ၁၅၀ ကျော်တွင် ပထမဆုံး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် မျိုးစပ်နေကြတ်မှုဖြစ်စဉ်
NASAက လ၏ သက်ရောက်ပိတ်ပင်နိုင်စွမ်း နည်းပါးသည့် ယင်းဖြစ်စဉ်ကို ရှားပါးသော မျိုးစပ်နေကြတ်ခြင်းဟု အမည်ပေးထား
မျိုးစပ်နေကြတ်ခြင်းခေါ် ထူးခြားကွဲပြားသည့် နေကြတ်မှု ပုံစံတစ်မျိုးကို ကမ္ဘာအနှံ့မှ လူသန်းပေါင်းများစွာက စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည်။ အထူးသဖြင့် အာဖရိက၊ ဥရောပနှင့် အမေရိက ဒေသများတွင် အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်ကို ပိုမိုထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်ခဲ့ရကြောင်း သိရှိရသည်။ NASAက လ၏ သက်ရောက်ပိတ်ပင်နိုင်စွမ်း နည်းပါးသည့် ယင်းဖြစ်စဉ်ကို ရှားပါးသော မျိုးစပ်နေကြတ်ခြင်းဟု အမည်ပေးထားသည်။ ယခုအခြေအနေသည် နှစ်ပေါင်း (၁၅၀)ကျော်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် မျိုးစပ် နေကြတ်မှုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့နေရာအချို့တွင် လုံးဝ မှောင်အတိကျသွားပြီး အချို့သော နေရာများတွင်မူ တစ်ပိုင်းတစ်စ နေကြတ်နေသည့် ဖြစ်စဉ်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ကြရသည်။
နေသည် လ၏ ပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာမြေသို့ အလင်းရောင် ကျရောက်မှု အားနည်းသွားခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့တည်နေရာအလိုက် နေကြတ်ပုံကို တွေ့မြင်ရသည့် အခြေအနေ မတူညီခဲ့ချေ။ အမေရိကန်တွင် တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်ပိုင်းက ပထမဆုံးအကြိမ် မျိုးစပ်နေကြတ်မှုကို စတင်တွေ့ရှိရပြီး ထို့နောက်ပိုင်းတွင်မှ အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာနှင့် အာဖရိက ဒေသများတွင် တွေ့မြင်လာရသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင်လည်း တစ်ဝက်တစ်ပျက် နေကြတ်နေသည့် ပုံရိပ်များကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ NASA၏ မှတ်တမ်းများအရ မျိုးစပ်နေကြတ်မှု ဖြစ်စဉ်သည် (၁၈၅၄)ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၀)ရက်နေ့က နောက်ဆုံး ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူးကြောင်း သိရသည်။ နောက်တစ်ကြိမ် အလားတူ ဖြစ်စဉ် ပေါ်ပေါက်ရန်မူ (၂၁၇၂)ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ (၁၇)ရက်နေ့ထိ စောင့်ရဦးမည်ဖြစ်သည်။
အာဖရိကတိုက်ရှိ ဂါဘွန်နိုင်ငံသည် ယခုဖြစ်စဉ်ကို မြင်ကွင်းအရှင်းဆုံး အထင်ရှားဆုံး တွေ့မြင်ခဲ့ရသည့် နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကင်ညာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းရှိ မြို့များတွင်လည်း လုံးဝ မှောင်အတိကျခဲ့ပြီး ယင်းဖြစ်ရပ်ကို ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည် အများအပြား အချိန်ယူ စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည်။ ယူဂန္ဓာတွင် သမ္မတ ယိုဝါရီ မူဆီဗီနီကိုယ်တိုင် မူလတန်းကျောင်းလေး တစ်ခုတွင် ကလေးများနှင့်အတူ မျိုးစပ်နေကြတ်မှု ဖြစ်စဉ်ကို နေကာမျက်မှန်တပ်၍ စောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ အဘူဒါဘီတွင်မူ ဖော်မြူလာဝမ်း ကားမောင်းပြိုင်ပွဲ ကျင်းပနေစဉ် ပရိသတ်များက နေကြတ်မှုကို စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည်။
သိပ္ပံ ပညာရှင်များက ယခုဖြစ်စဉ်ကို အရှည်ကြာဆုံးအဖြစ် (၁)မိနစ်ကျော်သာ တွေ့မြင်ရပြီး လိုက်ဘေးရီးယား အနောက်တောင်ဘက် (၂၀၅)မိုင်အကွာ သမုဒ္ဒရာထဲတွင် အချိန်အကြာဆုံး သက်ရောက်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။ ယင်းဖြစ်ရပ်ကို စောင့်ကြည့်သူများ အနေဖြင့် အကာအကွယ် မပါသည့် ဗလာမျက်စိဖြင့် မကြည့်ရန်မူ နက္ခတ်ဗေဒ ပညာရှင်များက ကြိုတင် သတိပေးထားပြီးဖြစ်သည်။ သာမန်အားဖြင့် အပြည့်အဝ နေကြတ်ခြင်းတွင် လသည် နေ၏ ပုံရိပ်ကို လုံးဝ ကာကွယ်လိုက်လေ့ရှိသည်။ သို့သော်လည်း မျိုးစပ်နေကြတ်မှုတွင် လသည် ကမ္ဘာနှင့် အဝေးဆုံးနေရာတွင် ရှိနေရာ နေ၏ ပုံရိပ်ကို အပြည့်အဝ မကာကွယ်နိုင်ချေ။ အဆိုပါ ရှားပါးဖြစ်စဉ်မျိုးတွင် လ၏ တားဆီးမှုကြောင့် နေလုံးကွယ်သွားသည့်တိုင် ရောင်စဉ်စက်ကွင်းတစ်ခု တောက်ပစွာ ဖြစ်တည်နေတတ်သည်။ ၎င်းကို "မီးလျံကွင်း"ဟုလည်း ခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိပြီး လကိုပတ်လျှက် တောက်ပစွာ ထွန်းလင်းနေလေ့ရှိကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
YouTube၏ တစ်နှစ်တာ အထူးချွန်ဆုံး ဂီတအနုပညာရှင်ဆုကို Eminem ရရှိ
ကမ္ဘာကျော် ဗီဒီယို Sharing ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြီးသည် ကိုယ်ပိုင်ဂီတဆုများကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ယခုနှစ်တွင် စတင်ပေးအပ်ခဲ့သည်။
YouTube Music Awards ဆုပေးပွဲတွင် နာမည်ကျော် Rapဂီတ အဆိုတော် Eminemက တစ်နှစ်တာ အထူးချွန်ဆုံး အနုပညာရှင်ဆုကို ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ကမ္ဘာကျော် ဗီဒီယို Sharing ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြီးသည် ကိုယ်ပိုင်ဂီတဆုများကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ယခုနှစ်တွင် စတင်ပေးအပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း YouTube၏ ဆုပေးပွဲ အစီအစဉ်သည် ပရိသတ်များကြား ရေပန်းမစားသေးသလို အဖွင့်ဆုပေးပွဲကို အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုသူ (၂၁၅၀၀၀)မျှသာ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယခုနှစ် အစောပိုင်းက MTV၏ ဗီဒီယိုဂီတဆု (VMA) အခမ်းအနားကို အင်တာနက်မှ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုသူ အရေအတွက်မှာမူ (၁၀)သန်းကျော်မျှထိ ရှိခဲ့သည်။
ယခုနှစ်၏ အထူးချွန်ဆုံး ဂီတအနုပညာရှင်အဖြစ် Eminemက ရွေးချယ်ခံရသလို တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံး သီချင်းဗီဒီယိုဆုအတွက်မူ တောင်ကိုရီးယား Popဂီတအဖွဲ့ Girls Generationက ရရှိခဲ့သည်။ SNSDဟု လူသိများသည့် ယင်းအဖွဲ့သည် မိုင်လီဆိုင်းရပ်စ်၊ ဂျက်စတင်ဘီဘာ၊ လေဒီဂါဂါ၊ One Directionနှင့် PSYကဲ့သို့ နာမည်ကြီးများကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့သည်။ YouTube၏ ပထမဆုံး ဆုပေးပွဲ အစီအစဉ်တွင် လူသစ်တန်းဆုအတွက် မက္ကလီမောရ်နှင့် ရိုင်ယန်လီဝစ်တို့က ရရှိခဲ့သလို တေလာဆွစ်ဖ်၏ I Knew You Were Trouble အယ်လ်ဘမ်ကလည်း ပရိသတ် အများဆုံးရရှိသည့် သီချင်းအယ်လ်ဘမ်ဆုကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ DeStorm၏ See Me Standingကမူ ဖန်တီးထိုးထွင်းမှု အကောင်းဆုံးဆုကို ရရှိခဲ့ပြီး ယခုအစီအစဉ်တွင် လေဒီဂါဂါ၊ Eminem၊ Arcade Fire၊ အေဗီဆီး၊ M.I.Aအစရှိသည့် နာမည်ကြီးများ၏ ဖျော်ဖြေမှုများ ပါဝင်ခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။ YouTube၏ ပထမဆုံး ဂီတဆုပေးပွဲကို နယူးယော့ခ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြေထဲပင်လယ် အစားအစာများက အမျိုးသမီးများရဲ့ ကလေးရနိုင်ချေကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်
မြေထဲပင်လယ်စတိုင် ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ အစားအစာများကို စားသုံးပေးတဲ့ အမျိုးသမီးများဟာ ရင်သွေး ငယ်ရနိုင်ချေ မြင့်မားတယ်ဆိုတာကို လေ့လာမှုတစ်ရပ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ Loyola University Health System မှ အာဟာရဗေဒပညာရှင်များက ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ငါးနဲ့ပဲအမျိုးမျိုး တို့နဲ့ ထုံမွှန်းထားတဲ့ မြေထဲပင်လယ်အစားအစာတွေကို စားသုံးပေးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ပဋိသန္ဓေရနိုင်ချေ မြင့်မားတယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြော ဆိုထားပါတယ်။ လေ့လာမှုခေါင်းဆောင် Brooke Schantz က “ကျန်းမာရေးရှုထောင့်အရ အာဟာရ တန်ဖိုး မြင့်မားပြီးကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ မြေထဲပင်လယ် အစားအစာတွေဟာ ရင်သွေးရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုသာ များစေတာမဟုတ်ပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်မှာလည်း စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် သန္ဓေသားရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ပြီး နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်”လို့ ပြောကြားထားပါတယ်။
မြေထဲပင်လယ် အစားအစာတွေမှာ မပါမဖြစ်ပါဝင်တဲ့ သံလွင်ဆီဟာ အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်ဝန်ရယူလိုတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ ပြည့်ဝဆီပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေကို ရှောင်ကျဉ်ရမှာ ဖြစ်ပြီး အသားကရတဲ့ ပရိုတင်းထက်စာရင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကရတဲ့ ပရိုတင်းကို စားသုံးပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုမှာပါဝင်တဲ့ အာဟာရဗေဒပညာရှင်များကတော့ ကိုယ်ဝန်ရယူလိုတဲ့ အမျိုးသမီးများကို တို့ဖူး၊ ပဲပြား၊ ပဲတောင့်ရှည်နဲ့ အစေ့အဆန်တွေကို ပိုမိုစားသုံးပေးဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
စပိုင်မလုပ်ရေး သဘောတူစာချုပ် ဂျာမနီနှင့် အမေရိကန် လက်မှတ် ရေးထိုးဖွယ်ရှိ
ဘာလင်၊ နိုဝင်ဘာ ၃
အက်ဒ်ဝပ်စနိုးဒန်၏ ဖွင့်ချမှုကြောင့် အမေရိကန်က ဂျာမနီ တယ်လီဖုန်း ပြောဆိုမှုများကို စောင့်ကြည့် ခြေရာခံနေခြင်း ပေါ်ပေါက်သည့်အတွက် နှစ်နိုင်ငံ သံခင်းတမန်ခင်းအရ အဆင်မပြေမှုများရှိနေစဉ် ဂျာမနီနှင့် အမေရိကန်တို့ အပြန်အလှန် စပိုင်မလုပ်ရေး သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ် ရေးထိုးတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ဂျာမန်သတင်းစာ တစ်စောင်၏ ရေးသားချက်အရ AFP သတင်းတစ်ရပ်က ဖော်ပြထားသည်။
ဂျာမနီ ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိများ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ရောက်ရှိနေစဉ် အထက်ပါ ပဏာမသဘောတူညီမှုကို ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်းသတင်းစာ FAS က ရေးသားထားသည်။
အဆိုပါ သဘောတူစာချုပ်ကို လာမည့်နှစ် အစောပိုင်းတွင် ပြုလုပ်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဂျာမနီအစိုးရနှင့် နီးစပ်သည့် သတင်းရင်းမြစ် တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ဂျာမနီ ပြည်တွင်း သြဇာကြီးဂျာနယ် Der Spiegel ကလည်း ယင်းသဘောတူညီချက် ထွက်ရှိလာရေးအတွက် နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်များ ညှိနှိုင်းနေကြကြောင်း ရေးသားထားသေးသည်။
အမေရိကန် အမျိုးသားလုံခြုံရေး အေဂျင်စီ NSA ၏ ဒါရိုက်တာ ကိတ်အလက်ဇန္ဒား ကိုယ်တိုင်က ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ် အန်ဂျလာမာကယ်၏ တယ်လီဖုန်းကို စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံပြောဆိုခဲ့သည်ဟုလည်း ယင်းသတင်းက ဆိုသည်။
အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးက တိုင်းတစ်ပါး ခေါင်းဆောင်များနှင့် ပြည်သူများ၏ တယ်လီဖုန်း ပြောကြားမှုများကို စောင့်ကြည့် ခြေရာခံနေသည်ဟု သတင်းများ ထွက်လာခြင်းကြောင့် ဝါရှင်တန်နှင့် ဥရောပ မဟာမိတ်များ ဆက်ဆံရေးကို ထိခိုက်ခဲ့ရသည်။
ဂျာမနီ ဝန်ကြီးချုပ် အန်ဂျလာမာကယ်၏ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကို ၂၀၀၂ ခုနှစ် ကတည်းက စောင့်ကြည့် ထောက်လှမ်း နေခဲ့ကြောင်းလည်း ထောက်လှမ်းရေး သတင်းပေါက်ကြားမှုအရ သိရှိရသဖြင့် ဂျာမနီက ဒေါသတကြီး ဝေဖန်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
ဂျာမနီသာမက အမေရိက၏ အိမ်နီးချင်း မက္ကဆီကို၊ ဥရောပ မဟာမိတ်များဖြစ်သည့် ပြင်သစ်၊ စပိန်တို့ကိုလည်း စောင့်ကြည့် ထောက်လှမ်းခဲ့သည်ဟုလည်း သတင်းများက ဆိုသည်။
NSA ဝန်ထမ်းဟောင်း အက်ဒ်ဝပ် စနိုးဒန်သည် ယခုအခါ ရုရှားနိုင်ငံတွင် တစ်နှစ်ကြာ ခိုလှုံခွင့် ရရှိခဲ့ပြီး အချို့မီဒီယာများနှင့် ဆက်သွယ်ကာ ၎င်းရရှိ သယ်ဆောင်လာခဲ့သော ထောက်လှမ်းရေး အချက်အလက်များကို ဖွင့်ချလျက် ရှိသည်။
အမေရိကသည် မိတ်ဆွေများ၏ တယ်လီဖုန်းကို ခိုးနားထောင်ခြင်း မပြုလုပ်သင့်ကြောင်း အန်ဂျလာမာကယ်က ဝေဖန် ပြောကြားခဲ့ဖူးသည်။